Tsipy kanetibe Notolorana 4 tapitrisa ariary avy izy efa-dahy
Baolina Kitra Malagasy Haato ny fifidianana, hoy ny FIFA
Araka ny fampitam-baovao voaray avy eny amin’ny “Maison du Foot-ball Malagasy” eny Isoraka dia nangatahan’ny rafitra iraisam-pirenen’ny baolina kitra eran-tany na ny FIFA haaton’ny FMF aloha ny “Processus electoral”
Matsiatra Ambony sy Vatovavy Fitovinany Tsy tanteraka indray ny fifidianana filohan’ny Ligy
Vita soa aman-tsara tahaka ny tany Boeny ihany koa ny fifidianana izay ho filohan’ny ligin’ny baolina kitra tany Bongolava ka nahalany an-dRakotonirina Mamonjisoa.
Razafiarivony Angelot Nibata ny « Prix PAISAC » basikety
Lasan’ilay “Instructeur FIBA Afrique" Malagasy, Razafiarivony Solofohery Angelot, ny loka natolotry ny STESAM avy amin’ilay fifaninanana “Prix ¨PAISAC”
Taranja baskety Namoaka mpanazatra 13 mianadahy ny FFPRO Antsirabe
Namoaka mpanazatra na “Coach” ho an’ny taranja Basket-ball ny klioba FFPRO Antsirabe. Niisa 13 mianadahy ireo indray navoaka ny sabotsy 13 janoary lasa teo, tao amin’ny Hotel de Thèrmes.
Boxe Chinoise Niverina any Frantsa Randriamalaza Jean Christian
Nandao an’i Madagasikara ka nitodidoha any Frantsa fonenany rehefa nandalo teto andro vitsivitsy (10 andro teo ho eo) ilay Malagasy nibata im-balo ny anaram-boninahitra Tompondaka eran-tanin’ny Boxe Chinoise.
Rugby Gold Top 8 Ftm sy Stm ary Cosa sy Usa no hifandona amin’ny 1/2 –dalana
Vokatry ny andro faha-3 n’ny lalao rugby à XV “Gold Top 8” notontosaina teny amin’ny kianja Makis teny Andohatapenaka ny alahady 14 janoary 2018 dia fantatra ankehitriny ireo fileovana hiatrika ny 1/2-dalan’ity fifaninana ity izay ho tontosaina ny alahady 21 janoary izao eny Andohatapenaka ihany
Telma Super Coupe lalao mandroso Nirava ady sahala 0-0 ny Fosa Juniors sy CNaPS Sport
Ady sahala 0-0 omaly alahady 14 janoary, tany amin’ny kianja Rabemanjara Mahajanga, no nisarahan’ny Fosa Juniors tompon’ny amboaran’i Madagasikara 2017 sy ny CNaPS Sport tompondakan’i Madagasikara 2017 niatrika ny Telma Super Coupe de Madagascar 2017 lalao mandroso.
Taorian�ny resabe niparitaka momba ny tokony hankasitrahana manokana ireo mpilalao miisa 4 niaro ny voninahi-pirenena ka nahavoahosotra an�i Madagasikara tompondaka erantany teo amin�ny taranja tsipy kanetibe, dia noraisin�ny filoham-pirenena teny Iavoloha ireo maherifo omaly.
Raha tsiahivina, ny taona 1999 no nahazoantsika io anaram-boninahitra io ary 17 taona aty aoriana vao tafaverina eo am-pelatanan’ny Malagasy indray izany. Velom-pisaorana ireo mpilalao ary nidera ny herimpon’izy ireo ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fandraisany ireo mpilalao izay notarihin’ny minisitry ny fanatanjahantena sy ny avy ao amin’ny Federasionin’ny tsipy kanetibe. Noho ny fanandratana avo ny voninahi-pirenena dia notolorana vola mitentina 4 tapitrisa ariary avy izy 4 mirahalahy izay nahitana an-dRakotondrazafy Lova, Razakarisoa Tita, Razafimahatratra Hery ary Andrianiaina Christian. Nisaotra manokana ny filoham-pirenena tamin’ny fihetsika sy fankasitrahany ireo ekipam-pirenena kosa ny mpanazatra ny ekipam-pirenena Andriamarohaja David Doris. Nanambara ny minisitry ny fanatanjahantena Andriamosarisoa Jean Anicet fa tsy ho ela ny hetsika goavana hankasitrahana manokana ireo mpilalao sy atleta nanandratra avo ny voninahi-pirenena tamin’ny fifaninanana iraisam-pirenena. Zava-dehibe ny fankasitrahana sy fijerena manokana ny mpanao fanatanjahantena mba hahatonga azy ireo hiezaka hatrany. Voninahitry ny firenena rahateo no harovana, ka rariny raha tsinjovina manokana ireo hita fa tena miezaka ka mahita vokatra, ka manome voninahitra ny tanindrazana.